Accueil Ny Mpitandrina Fampianarana Fandinihana soratra masina Azoma 28 Septembre
Mbola mamerina ny fiarabana hatrany antsika tsirairay.
Araky ny efa voalaza tao amin’ny raharaham-piangonana dia efa nanomboka ny fianarana soratra masina ary mitohy hatrany izany. Ny fotoana fandalinana manaraka dia ny Azoma 28 septambra ho avy izao. Mbola mitohy hatrany ny fandalinana ny loha-teny : " FINOANA- FAHENDRENA- FAHALALANA"
Izao avy no vaky teny ao amin’ny soratra masina izay hafaka vakian-tsika ho fikarakarana ny fampianarana :
Gen 12 and 1---12
Exode 3 and ( 11—13)
Actes 6 and (7—8)
Mpitoriteny 11 and (1—4)
Marihana fa efa nisy tamin’ireo teny ireo no efa nofakafakaina, fa averina eto mba ahafahan’izay tsy teo mamaky hatrany ny tenin’ny soratra masina sy anarahiny ny fampianarana.
Raha toa sanatria ka misy hadinoko angamba ny Ray aman-dreny mpitandrina hafaka manampy izany na manamarina ny diso.
Dia manao veloma antsika amin’ny anaran’ilay Avo.
Lalao Razafimandimby, mpitantsoratra.